Degmada Baardheere Ee Gobalka Gedo Ayaa waxaa iska Soo Dhiibay Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan Baardheere laguna magacaabo Jaamac Muuse ayaa sheegay saddex ka mid Al-Shabaab oo uu ku jiro nin Amiir ah ay isu soo dhiibeen.
“Waxaa ciidamada isku soo dhiibay saddex maleeshiyo oo nin amiir ah ku jiray, waa la soo dhoweeyay, anaga gacanta ku heyna, si wanaagsan ayaana loola dhaqmay”ayuu yiri Sarkaalkan lagu magacaabo Jaamac Muuse oo warbaahinta la hadlay.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay isu soo dhiibeen dagaalyahno ka tirsan Al-Shabaab.
Dhinaca kale Sarkaal isna la sheegay in Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka zako uruurinta Gobolka Bakool ayaa isagana isu dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan Gobolka Gedo.
Howl galka Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ka wadaan gobollada dalka ayaa Al-Shabaab waxaa looga saaray deegaano muhiim ah.